cusmaan | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 54
Halkan ka dhageyso barnaamijka dhuuxa.
Waaliga Jubbooyinka Oo ka Warbixiyay Xaaladda Guud ee Wilaayada.(Dhagayso Qeybta Koowaad)
Abuu Ghureybkii Ciraaq Oo laga furay Yaman!! (Akhriso Warbixin Naxdin leh).
Diyaaradaha Ruushka oo Xasuuq foolxumo badan ka geystay gobolka Idlib.
Wararka ka imaanaya dalka muslimka ah ee Suuriya ayaa sheegaya in diyaaradaha dowladda Ruushka ay duqeymo xoogan ka geysteen magaalooyin katirsan gobolka Idlib oo ay maamulaan jamaacaadka islaamiga ah. Wararka ayaa intaas ku daraya, in diyaarad nooca dagaalka oo dowladda Ruushka ay leedahay ay dhowr gantaal ku garaacday suuqa weyn ee magaalada Macarshuuriin oo u dhow magaalada Idlib oo ah ...	Read More »
Xuuthiyiinta oo Duqeeyey magaalada Riyaad ee dhulka Xarameynka.
Malleeshiyaadka Xuuthiyiinta oo taageero ka hela dowladda Iiraan ayaa gantaal rida dheer waxay ku tuureen magaalada Riyaad oo ah caasimadda maamulka Aala-Sucuud. Gantaalka oo ahaa mid rida dheer, islamarkaana laga soo tuuray dhanka Yaman ayaa soo gaaray hawada magaalada Riyaad, waxaana markaas la sheegay iney ka hortageen ciidamada difaaca cirka ee Aala-Sucuud. Xuuthiyiinta war kasoo baxay waxay ku sheegeen in ...	Read More »
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab oo dagaal ku qaaday Afgooye.
Dagaalyahanno katirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay waxay ka dagaallameen gudaha magaalada Afgooye oo qiyaastii 30KM ka fog magaalada Muqdisho. Dagaalka oo ahaa mid culus, islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayay ciidamada Mujaahidiintu kula wareegeen xaafado katirsan magaalada Afgooye. Ciidamada dowladda oo markii dambe dagaalka looga awood roonaaday ayaa u baxsaday dhanka kontoroolka Baar Ismaaciil, oo ...	Read More »
Maraykanka: Tobanaan Ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday Tareen kabaxay khadka uu ku socday.
Markii ugu horeysay tan iyo markii uu soo baxay cadadkii 17-aad ee Inspire, ayna kaga hadashey sida tareennada looga leexiyo khadadka ay isticmaalaan taas oo keeni karta khasaare badan, waxaa Maraykanka ka dhacay ceynkaas ah. Tareen ay saarnaayeen kudhowaad 100 ruux ayaa si kedis ah looga leexiyay khadkii uu isticmaalayay, isagoona jiiray dad badan oo maraykan ah, kuwaas oo ku ...	Read More »
Qarax Ka dhacay duleedka Boosaaso oo Askar badan lagu laayay.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in qarax culus lagu weeraray Askar katirsan maamulka Puntland, kuwaas oo marayay wadada isku xirta magaaada Boosaaso iyo deegaanka Galgala. Qaraxa oo ahaa noocyada lagu aaso dhulka ayaa haleelay gaari Cabdi-bile ah oo ay saarnaayeen ciidamo badan oo katirsan maamulka Puntland ee gacan saarka la leh dowladda xabashida ...	Read More »
Kuxigeenka madaxweynaha Marayknaka Donald Trump oo dib u dhigay booqasho uu ku mari lahaa bariga dhexe.
Iyadoo dhawaan markii Donald Trump uu jeedinayay khudbadda uu ugu aqoonsaday in Qudus ay tahay caasimadda Yahuuuda, uu ballanqaaday in ku xigeenkiisa uu booqasho ku mari doono wadamada bariga dhexe, ayaa hadda Maraykanku wuxuu ka laabtay go’aankaas. Aqalka Cad ayaa war uu soo saaray wuxuu ku sheegay In Penis uu dib u dhigtay booqasho uu ku tagi lahaa dhulka Yahuuda ...	Read More »
Xiisad Siyaasadeed oo ka taagan Muqdisho, kadib qabashadii C/raxmaan C/shakuur.
Magaalada Muqdisho waxaa ka socoda kulamo ballaaran oo u dhexeeya siyaasiyiin ku heeb ah C.raxmaan C.shakuur oo habeenkii xalay ciidamo katirsan dowladda ay ka qabteen gurigiisa oo ku yaala nawaaxiga hotel Jazeera. kulamada ayaa lagu gorfeynayaa sida siyaasiyiinta iyo xillibaanada isku heebta ah ay go’aan mideysan uga qaadan lahaayeen duulaanka kaga imaanaya madaxweyne Farmaajo iyo ciidamadiisa. Inkastoo weli wax war ...	Read More »
Askar katirsan Puntland Oo Lagu dilay Boosaaso.
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegaya in rag hubeysan ay labo Askari oo katirsan Puntland ku dileen bartamaha magaalada. Askarta la dilay waxay ka tirsnaayeen waaxda qaabilsan baadda ee loogu yeero Canshuuraha. Rag hubeysan ayaa si wadajir ah u toogtay labada Askari, kadibna goobta ayay kabaxsadeen. Ciidamo katirsan Puntland ayaa soo gaaray goobta uu dilka ...	Read More »
Diblumaasiyad British ah oo lagu dilay Lubnaan.
Wararka ka imaanaya dalka Lubnaan ayaa shaaca ka qaadaya in mid kamid ah wadooyinka magaalada Beyrtuu laga helay meydka Diblumasiyad katirsan safaaradda Ingiriiska uu ku leeyahay dalkaas. Haweeneyda la helay meydkeeda waxaa lagu magacaabaa Rebecca Dyke, waxaana in muda ah ay katirsaneyd diblumaasiyiinta dowladda Ingiriiska. Saraakiisha Booliiska Lubnaan ayaa shaaca ka qaaday in meydka haweeneyda uu ka muuqdo inaan lagu dilin ...	Read More »
Siyaasiyiin Mucaarad ah Oo Guryahooda oo ku yaala Muqdisho lagala baxay.
Magaalada Muqdisho waxaa habeenkii xalay ahaa guryahooda lagala baxay siyaasiyiin caan ah oo kasoo horjeeda siyaasadda madaxweynaha dowladda Farmaajo. Siyaasiyiinta guryahooda lagala baxay waxaa kamid ah C/raxmaan C/shakuur Warsame iyo Sayid Cali Macallin Cabdulle, kuwaas oo mudooyinkii ugu dambeeyey jeedinayay hadallo ay ku weerarayaan siyaasadda Farmaajo. Ciidamo katirsan PS-ta dowladda ayaa saq dhexe ragan kala baxay guryahooda, lamana oga halka ...	Read More »
Page 54 of 131« First...304050«5253545556	»	607080...Last »